Muqdisho:-Madaxweynaha DFKM Shariif Sh Ahmed ayaa maanta magacaabay guddi heer wasiiro ah oo wada hadal la furaya Maamulka Somaliland waxaana gudoomiye looga dhigay Wasiirka Arrimaha gudaha iyo Amniga Qaranka ee C/samad Macalin Maxamuud waxaana uu madaxweynaha u dhoofay intaas ka dib dalka itoobiya.
Gudiga wadahadalka la gali doona Maamulka S/land ayaa waxaa ka mid ah Wasiirka arrimaha dibadda ee DFKM C/laahi Xaaji Xasan, Wasiirka Maaliyadda , Wasiirka howlaha guud guryeyenta waxaana ay la shaqeyn doonaan wasiirka arimaha gudaha ee DFKM gudiga ayaa ka koobnaan doona ilaa 7 xubnood .
Wasiiro dowladaha arrimaha dibadda oo ka mid ahaa wafdiga madaxweynaha DFKM u raacay dalka Itoobiya ayaa sheegay in DFKM ay fulinayso qodobadii ka soo baxay shirkii London kaas oo qodobkiisa lixaad uu ahaa in ay wadahadal la furaan Maamulka S/land.
Madaxweynaha DFKM ayaa haatan ku sugan magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya halkaas oo uu uga qeyb gali doono shir looga hadlayo arimaha Soomaaliya.
Waa la sheegay in la wada hadli doono Insha Allaah,laakiin wali lama sheegin meesha lagu shiri doono iyo halka laga bilaab doono wada xaajookaas.